“တရုတ်နိုင်ငံသည်- ဝိညာဉ်တော်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရသည်” | China - Sealed by God's Spirit! | Real Conversion
“တရုတ်နိုင်ငံသည်- ဝိညာဉ်တော်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရသည်”
CHINA – SEALED BY GOD'S SPIRIT!
ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအာရ်
၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ငါတို့ဘုရားသခင်၏ ကျွန်တို့ကို နဖူး၌ တံဆိပ်မခတ်မည်တိုင်အောင်၊ မြေ၊ပင်လယ်၊ သစ်ပင်တို့ကို မညှင်းဆဲပါနှင့်ဟု ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်လေ၏ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၇း၃)၊၊
ပေကျင်းမြို့၊ ကမ္ဘာ့အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော်ကြီးကို မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် သန်းနှင့်ချီသော ကမ္ဘာသူ^သားများတီဗွီဖန်သားပြင်ကနေ ကြည့်ခဲ့ကြမှာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည်လည်း ရုတ်တ ရက် အခြားသောနိုင်ငံများထက် မြန်ဆန်တိုးတက်ခြင်းပြောင်းလဲနေပြီ။ ထိုနေ့ည ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားတို့၏ မျက်စိသည် တရုတ်နိုင်ငံမြေပေါ်သို့ အကြည့်ချင်းဆုံကြပေမည်။ ပို၍ထူးခြားသည်မှာ လွန်ခဲ့သော (၂၅)နှစ် လောက်ကစ၍ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ ကြီးထွားပြောင်းလဲနေသည်ကို အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရပါသည်။
Time တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း၏ အစိုးရဌာနက အကြီးအကဲ ဒေးဝိဒ်အိတ်မန်း ရေးသားသော Jesus in Beijing (Regnery Publishing, Inc, 2003) စာအုပ်၌ ရေးသားထားသည်မှာç
တရုတ်နိုင်ငံသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် တိုးတက်များပြားလာပါသည်။ တရုတ် ပြည်သူ^သားအားလုံး ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံ သည် လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးသော ကျေးလက်ဒေသနှင့် မြို့ကြီးပြကြီးများမှ ခရစ်ယာန်ပြောင်းလဲသူ နှုန်းမြင့်တက်လာပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်(၃)စုမြောက်ချိန်တွင် တရုတ်လူဦးရေး၏ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြသည်ဆိုသည်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်လောက်ပါသည်။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း (၇)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ ဖြစ်လာကြသည်။ ထိုနှုန်းထား သည် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် ခရစ်ယာန်ပြောင်းလဲလာနှုန်း အများဆုံးသော နိုင်ငံ၌ပါဝင်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံများစွာရှိသည်အနက် တရုတ်နိုင်ငံ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာနှုန်းသည် နှစ်ဆယ့်တစ် ရာစုနှစ်အတွက် ရှေ့တန်းက ဦးဆောင် နေပါသည်။ အာရှတိုက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခရစ်ယာန်ပြောင်းလဲနှုန်း ထက်ဝက်သည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုတွင် ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံး ခရစ်ယာန်ဖြစ်နှုန်းအတိုင်းအတာကို စံချိန်ချိုးပါလိမ့်မည်။ ဤသည် ဖိလစ်ဂျင်ကင်၏စာအုပ် ဖြစ်သော Thန ညနထအ ဃ့မငျအငညေိသာ ခရစ်ယာန်လောကအသစ်ဟူသော စာအုပ်အားဖြင့် နားလည်ရပါသည်။ ယနေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံ ဖြစ်နေပေပြီ။ ခရစ်ယာန်တို့၏ အသိပညာကြွယ်၀ခြင်းသည် ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကမှ တရုတ် နိုင်ငံသို့ လှည့်ပြောင်းနေပြီဖြစ်သည်။ (၂၁)ရာစုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တရုတ်တို့ ၏ ရာစုနှစ်ခေတ်ကြီး ဖြစ်နေပြီလား၊ ထိုစာအုပ်၌ အားရကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းသော ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကို လွှမ်းမိုးလာပြီး လာမည့် ဆယ်စုနှစ်များ အထိ လွှမ်းမိုးနေ ပေဦးမည်။ ထိုကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ တရားလွှမ်းမိုးခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်သော ကမ္ဘာကြီးကိုပင် ပြောင်းလဲစေပါ လိမ့်မည် ဟု (David Aikman, Jesus in Beijing: How Christianity is Transforming China and Changing the Global Balance of Power, Regnery Publishing, Inc. 2003, pp. 285, 291, 292).
သို့ပါသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ပြောင်းလဲခြင်းသည် လွယ်လင့် တကူ ဖြစ်လာပြီတော့မဟုတ်ပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲများ၌ ခရစ်ယာန်သာသနာကို သွေးချွေး မျက်ရည် ကျလျက် ပင်ပန်းဒုက္ခပေါင်းများစွာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာဖို့ သွေးစွန်းတိုက်ပွဲများစွာ စာတန်မာရ်နတ်နှင့် နှစ်တစ်ရာတိုက်ပွဲအထိတိုင် တိုက်ပွဲဝင်ဆင်နွဲခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် လက်ဝှေ့သမားများ၏ (1900) ခုနှစ်လောက်က ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ပြောပြေ လိုပါသည်။ Riley K. Smith ပြောကြားသည်မှာ-
လက်ဝှေ့သမားများက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်သူတို့အား ကြမ်းတမ်းရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသည်။ သာသနပြုဆရာများသည် တရုတ်နိုင်ငံသား များ၏ စိတ်ဓါတ်များကို ခိုးယူကြပြီး ကလေးသူငယ်တို့၏ အနာဂါတ်အမြင်ကိုလည်း ပြောင်းလဲ မှောက်မှားစေသည်ဟူသော (ဇူဇီဧကရာဇ်ဘုရင်မ၏)အမြင်ကို လက်ခံယုံကြည်ကြသည်။ ဧကရာဇ် ဘုရင်မ ဒေါ်ဝါကာသည် (၁၉၀၀) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၀)ရက်နေ့တွင် (အဖြူရောင် ဝိညာဉ်ဆိုးများ)ကို ဆန့်ကျင်ကြပြီး အသေသတ်ရန် လျှို့ဝှက်စွာ အမိန့် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။ လူသတ်သမားများဖြစ်သော လက်ဝှေ့သမားများက မြို့ကြီးများကို ဆိုးဆိုး ဝါးဝါး ဖျက်ဆီးကြသည်။ ထိုသူတို့က တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် နာမည်များကို ကောက်ခံစာရင်းယူကာ အပိုင်းပိုင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သာသနာပြု ဆရာကြီးများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိခရစ်ယာန်များကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရှန်စီမြို့ တေယန်သည် အရက်စက်ဆုံး သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်သောမြို့ဖြစ်ပါသည်။ မြို့အဝင်တံခါးမျာကို ပိတ်ထားခိုင်ပြီး ထောင်ချောက်ဆင်ကာ ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက် သတ် ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
(၁၉၀၀) ခုနှစ် ဇွန်လနောက်ဆုံးရက်တွင် ရာဇဝတ်သားအုပ်စုများက ဗြိတိန်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်နှင့် ရှာအိုယန်းသာသနာပြုဝန်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါသည်။ သာသနာပြု ဆရာကြီးများနှင့် တရုတ်ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တို့သည် မိုင်ဝက်လောက် ဝေးသော နှစ်ခြင်း လူငယ်များကျောင်းသို့ ခိုဝင်ပုန်းရှောင်ခဲ့ကြရပါသည်။ ထိုနေရာသို့ သူတို့ ရောက်သောအခါ သာသနာပြုဆရာမဖြစ်သော အီဒက်ဟုတ်သည် တရုတ်အမျိုးသမီး ကျောင်းသူနှစ်ဦးကို ထိုမီးလောင်နေသောကျောင်း၌ ကျန်ခဲ့သည်ကို သိသွားသဖြင့် ဆရာမ သည် မီးလောင်နေသော အဆောက်အအုံသို့ ပြေးလွှားကယ်တင်ခဲ့ပါသော်လည်း ရာဇဝတ်သားများက ဖမ်းဆီးမိသည့်အတွက် ထိုမီထဲ၌ပင် အသေခံစေခဲ့ပါသည်။ သာသ နာပြုဆရာမ အီဒက်ဟုတ်သည် နောက်ဆုံး အသက်မထွက်ခင် ထိုမီးထဲ၌ပင် ဆုတောင်း ကာ အသက်ချုပ်ခဲ့ရပါသည်။
ထိုသို့ရက်စက်သတ်မြတ်မှုကို ကြား၍ စိတ်ဆိုးနေသော သာသနာပြုဆရာများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများကိုလည်း ဖမ်းဆီးပြီး ကျောက်ခဲနှင့် အသေ သတ်ကြပါသည်။ လည်ပင်းကိုဖြတ်ပြီး အသေသတ်ကြသည်။ ထိုသို့ အသေခံသော သူတို့၏ခေါင်းကိုဖြတ်ယူကာ မြို့တံတိုင်းပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲလျက် အခြားသော ခရစ်ယာန် များကိုလည်း သတိပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသတင်းကိုကြား၍ မွန်ဂိုးလီးယားသို့ အခြားသော မိတ်ဆွေနှင့်မိသားစုနဲ့အတူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ရေးသားခဲ့ သည်မှာ “အကယ်၍ ထိုရက်စက်ခြင်းထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့ မလွတ်မြောက်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အတွက် အသက်ရှင်သလို ခရစ်တော်အတွက် အသေခံသည်ဟူ၍ ရေးသား ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့လာရောက်ပြီး သာသနာပြုသည့်အတွက် နောင်တမရရှိခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော်၏ ရွေးကောက်ခြင်း ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ခေါ်ဖိတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောက်ရွံ့ လွန်း၍ တုန်ရီစွာရေးသားထားသော လက်ရေး စာမူအတွက် ခွင့်လွှတ်ကြပါ ဟူ၍” ရေးသားပါသည်။ ထိုသူနှင့်အပေါင်းအသင်းများက မကြာမှီခေါင်းအဖြတ် ခံရမှာ သေချာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် မလွတ်ကင်း ကြပါ။ အများသောသူတို့သည် ခရစ်တော်ကိုစွန့်ကြသည့်အတွက် အသက်သေဘေးမှ လွတ်မြောက်လာရကြ ပါသည်။ အချို့သောသူတို့က အရှိအတိုင်း ဝန်ခံကြသည်။ အချို့ကမူ ဝန်မခံကြပါ။ ငြင်းဆန်သော သူတို့သည် ခရစ်တော်အပေါ် သစ္စာခံသူများဖြစ်ကြပါသည်။ ယန်ဆိုသူတစ်ဦးနှင့် ဇနီးအား နတ်ဘုရား ကျောင်းတိုင်၌ ချဉ်နှောင်ထားကြသည်။ လက်ဝှေ့သမားများက လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက်ကြပြီး လောင်နေသော မီးတောက်ထဲသို့ ရှို့ကြသည်။ သို့ပါသော်လည်း ထိုသူတို့နှစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ဝန်ခံဆဲပင် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ရှုးနံ့နံ့လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦးက မစ္စယန်အား မီးထဲက ကယ်ယူခဲ့သည်။ သူ့ယောက်က်ျm; ကိုမူ ထိုမီးထဲ၌ပင် လောင်ကျွမ်း စေခဲ့သည်။ သူ့အလောင်းကို လူသေအလောင်းမီးရှို့ရာ ထင်းပုံပေါ်မှာ ပစ်ချကာ လောင်ကျွမ်းစေခဲ့ကြသည်။ ထိုအလောင်းကို လောင်နေစဉ် ဆယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော စစ်သားကိုပင် အပိုင်းပိုင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသတင်းကိုကြား၍ ဒေါသမီးလောင် နေသော စစ်သား များက ထိုနတ်ဘုရားဗိမာန်တော်မှ လက်ဝှေ့သမားများအား ခေါ်ထုတ်ကြသည်။ မီးလောင်နေသော မစ္စတာယန်ကိုလည်း ဆယ်ယူကြပြီး ရက်စက်သော တရားသူကြီးက ထိုမစ္စတာယန်အား ထောင်ချကာ ထောင်ထဲ၌ပင် ကွယ်လွန်သွားရှာ ခဲ့သည်။
နောင်ပုံမှန်အနေအထားသို့ ပြန်ရောက်ချိန်တွင် သုံးသောင်းထက်မနည်းသော တရုတ်နိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်များ မာတုရအသေခံခဲ့ကြပြီး (in The China Martyrs of 1900,) ရောဘတ်ကာဗန်ထရီဖေါဆက် ရေးသားထားသည်မှာ လက်ဝှေ့သမားတို့က ရက်ရက် စက်စက်သတ်ဖြတ်၍ မာတုရအသေခံသူများသည် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံ အသင်းတော်သမိုင်း၌ မာတုရအသေခံသူများထက် များနေပါသည်။ ရင်နစ်အောင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ခံကြရသည်။ သေသည့်တိုင်အောင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံကြရ သည်။ (Riley K. Smith, China: the Blood-Stained Trail, Living Sacrifice Book Company, 2008, pp. 46, 47, 49, 50, 51).
ကမ္ဘာဒုတိယစစ်ပွဲတုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်စဉ်ကာ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းကို ပြောပြလိုပါသေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်ဦး သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာတိမောသေလင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မိဘမဲ့ကျောင်း၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်များချီတက်ဝင်ရောက်စဉ် ဒေါက်တာလင်း က မိဘမဲ့ကလေးများနှင့်သူ၏ဇနီးနှင့်သမီးကို ဘေးလွတ်ရာသို့ လှေဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန် လေတပ်များ ထိုလှေကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သဖြင့် ဒေါက်တာလင်း၏ ဇနီးနှင့်သမီးတို့ အသက်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ဒေါက်တာလင်းက လှေအနီးအနားသို့ မရောက်ခင် ထွက်ပြေးခဲ့ရ၍ လည်ပင်း၌ထိခိုက်ကာ အသက်သီသီ ကလေး လွတ်မြောက်ခဲ့ရပါသည်။ သူ၏လည်ပင်းအနာဖြင့် သေလုမျောပါးခံရနေပါသော်လည်း အမေရိကန် သို့ ပြန်ရောက်လာနိုင်သဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့ရကာ ဤဘုရားကျောင်း၌ပင် ကျွန်ုပ်၏လက်ဦးသင်းအုပ်ဆရာ အဖြစ် ကျမ်းစာကို (၂၄)နှစ်တိုင်တိုင် သင်ကြားခဲ့သည်။ သင်းအုပ်ဆရာ ဝုန်းပရန်ကဲ့သို့ ဒေါက်တာလင်း သည်လည်း မာတုရခေတ်ကကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရသော်လည်း ထိုအန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်လာကာ ခရစ်တော် အဖို့ တရားဒေသနာဟောကြားခဲ့သူဖြစ်သည်။ (၁၉၆၆-၁၉၆၉) ခုနှစ် ယဉ်ကျေးမှုအသွင်ပြောင်းလဲရေးကာလ ကွန်မြူနစ်အာဏာရှင် မော်စီတုံးလက်ထက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်အသေခံတိုက်ခိုက်ခြင်းအကြောင်းလည်း ပြောလိုပါ သေးသည်။ သင်းအုပ်ဆရာ ရစ်ချက်ဝုန်းဘရန်းက အဖက်ဖက်၌တော်သော ဆရာတစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌လည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တရားဒေသနာဟောကြားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူသည် လေးစားဂုဏ်ယူဖွယ် “မာတုရအော်သံ (The Voice of the Martyrs) စာဆောင်ကို တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ www.persecution.com ကိုနှိပ်ဝင်နိုင်ပါသည်။ သင်းအုပ်ဆရာ ဝုန်းဘရန်း၏ (တနဘျငအန) ၌ တရုတ်နိုင်ငံရှိခရစ်ယာန်များအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ကြည့်ရှု ဖတ်ကြားနိုင်ပါသည်။ သင်းအုပ်ဆရာဝုန်းဘရန်းသည် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သော မာတုရဖြစ်သည်။ ရူမီးနီးယားကွန်မြူနစ်အကျဉ်းစခန်း၌ (၁၄)နှစ်တိုင်တိုင် အကျဉ်းကျခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် (၃)နှစ်တိတိ အသံမကြား နေရောင်မမြင်သော အခန်းကျဉ်းထဲ၌ ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသည်။ ဤဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ် အပြီးတွင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး Tortured For Christ ခရစ်တော် အတွက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဟူသော သင်းအုပ်ဆရာဝုန်းဘရန်း၏ အခွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ကြ ပါစို့ ။ သင်းအုပ်ဆရာဝုန်းဘရန်းပြောကြားသော တရုတ်နိုင်ငံ မော်စီတုံးလက်ထက် ယဉ်ကျေးမှု အသွင်ပြောင်းလဲရေးကာလ၌ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ၏ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်း နှင့်ပါတ်သက်သော ဝုန်းဘရန်းပြောကြားသမျှကို နားထောင်စေလိုပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်းသည် အနှိုင်းမဲ့ဖြစ်၏။ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဦးဆုံး သာသနာပြုဆရာကြီးဒီ.ရီစ်ပြောကြားသည်မှာ “ကျွန်ုပ်၏တရုတ်အမျိုးသား မိတ်ဆွေများသည် အသေခံပေးဆပ်ကြကုန်ပြီ။ ထောင်ထဲအကျဉ်းချခံရပြီ။ နောက် တစ်ဦးကတော့ မျက်စိကွယ်သွား ရှာပြီ။ နောက်တစ်ယောက်ကိုကျတော့ အခန်း ကျဉ်းကျဉ်းထဲ၌ ဖမ်းဆီးချုပ်ထား ကြပြီ။ ကျန်နှစ်ဦး မှာ တီဗီရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွားရှာပြီ။ သို့သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထောင်နှင့်ချီ၍ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူများ များသထက်များနေပါသည်။
အိန္ဒိယအမျိုးသား ဒေါက်တာတစ်ဦးဖြစ်သော ကာမာန်ရှန်ဒတ်ဒ်သည်လည်း အကျဉ်း ထောင်ထဲတွင် ခြေထောက်ဖြတ်ပစ်ခြင်း ခံရသည်။ မျက်စိလည်း ထုတ် ပစ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။
ဗီလာဒီမီတာတီစ်ချပ်ဗ် ရုရှားအမျိုးသားတစ်ဦးလည်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ အဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရသည်။ သံကြိုးနှင့်တုပ်နှောင်ထားပြီး မဟုတ်မမှန်သက်သေ ထွက်ဆိုသည့်တိုင်အောင် အုတ်နံရံ တွင် အရိုးကျိုးသည့်အထိ ချိတ်ဆွဲထားသည်။ သို့သော်လည်း ထိုသူသည်အမှန်အတိုင်းသာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ်ရဲသားများ သည် ထိုသူ၏အိမ်သို့သွားရောက်ပြီး ကလေးငယ်ကို မ ယူပြီး ကလေးအမေအား အကယ်၍ ခင်းဗျားယောင်္ကျားပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု လက်မှတ်မရေးထိုးပါက သင့်ကလေးကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ပစ်မည်ဟုဆို၏။ ကလေးအမေ ကလည်း အမှန်တရားကိုသာ ဆွဲကိုင်သူဖြစ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ်ရဲ့သားများက ကလေးအမေကိုယ်တိုင် မိမိ၏ကလေးကို သတ်ဖြတ်စေပြီး၊ ထိုမိခင်ကိုလည်း သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၀၊ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ မော်စကိုရေဒီယိုအသံမှ (၁၀)နှစ်တာ အတော အတွင်း (၂၅)သန်းမက တရုတ်နိုင်ငံတွင် အသေသတ်ခြင်းခံရကြသည်။ သန်းချီသော သူတို့ကို အကျဉ်းစခန်း များသို့ ချပစ်ကြသည်။”
၁၉၆၉၊ မေလ ၇ ရက်နေ့ မော်စကိုသတင်းစာ၌ ရေးသားဖေါ်ပြသည်မှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ကန့်နှင့်ရောသောမီးဖြင့် ဆူနေသောရေထဲသို့ မျက်စိ ပွင့်ထွက်လာသည့် အထိ ထည့်ပြုတ်ကြသည်။ မောင်းချဓါးဖြင့် ခြေထောက်များကို ခုတ်ဖြတ်ကြသည်။ ဦးနှောက်ပွင့် ထွက်လာသည်အထိ ခေါင်းကိုကျောက်ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်ကြသည်။ သိသိသာသာရေးသားထားသည်။ များစွာသောတရုတ်ညီအကို မောင်နှမများသည် မျက်စိကန်း၍ လက်နှင့်စမ်းတဝါးဝါးစမ်း၍ သွားနေရကြပြီ။ အချို့တို့သည် ခြေလက်ဖြတ်တောက်ရသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်ဖြင့် ရွှေ့လျားသွား နေရကြသည်။ သို့ပါသော်လည်း မြေအောက်ခရစ်ယာန်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် အလျင်အမြန် ပြောင်းလဲ တိုးပွားလျှက် ရှိနေပါသည်။ (Pastor Richard Wurmbrand, Th.D., Where Christ is Still Tortured,Marshalls Paperbacks, London, 1982, pp. 130. 131).
ရင်နင့်အောင်စူးရှသော နာကျင်ဝေဒနာများ တရုတ်နိုင်ငံ၌ရှိ ခရစ်ယာန်များ ခံစားနေရခြင်း ကို တနင်္ဂနွေနေ့ည၌ နားထောင်ရကြပြီး ဘုရားကျောင်း၌ လာရောက်ကြသော သူတို့အထဲက “ရင်နင့်အောင်ညှင်းပန်းခြင်းကိုခံရကြပြီး အကျဉ်းထောင်ထဲ မတရားသွင်းချခြင်းကို ခံရသော်လည်း အဘယ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိလူများ ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ ဝင်ရကြသနည်း ၊ အဖြေသည် သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌သာတွေ့ရပါသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ပင် ကောင်းကင်တမန်များက “ ငါတို့ဘုရားသခင်၏ ကျွန်တို့ကို နဖူး၌တံဆိပ်မခတ်မည်။
“ငါတို့ဘုရားသခင်၏ ကျွန်တို့ကို နဖူး၌ တံဆိပ်မခတ်မည်တိုင်အောင်၊ မြေ၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်တို့ကို မညှင်းဆဲပါနှင့်ဟု ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်လေ၏(ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၇း၃)၊၊
၎င်းကျမ်းပိုဒ်က ဂျူး ၁၄၄၀၀၀ တို့သည် ခရစ်တော်ထံ ပြန်လည်တိုးဝင် ပြောင်းလဲ ကြပါလိမ့်မည်။ ထိုသူတို့၏ နဖူး(စိတ်နှလုံးသား)၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က တံဆိပ်ခတ်ပါ လိမ့်မည်။ ဧဖက် ၁း၁၂-၁၃ ၌ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အကြောင်းကိုပြောထားပါသည်။
“အကြောင်းမူကား ခရစ်တော်ကို မျှော်လင့်နှင့်သော ငါတို့အားဖြင့် ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းစေခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သတည်း။ သင်တို့သည်လည်း ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့် ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော သမ္မတရားကို ကြားနာရ၍ ထိုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီးမှ ကတိတော်နှင့် ယှဉ်သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံကြရသည်။” (ဧဖက် ၁း၁၂-၁၃)
လူတစ်ဦးသည် စစ်မှန်စွာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးနောက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံပြီးဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ် ၇း၃၌ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (၁၄၄၀၀၀)သော ဂျူးလူတို့သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ နဖူး၌ဘုရားသခင်၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရကြသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရကြမည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီ နောဧနှင့် မိသားစုသည် သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်တော်မူပြီး ဘုရားသခင်က သင်္ဘောတံခါးကို ပိတ်၍တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ခံရသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၇း၁၆)။ နောဧမိသားစု သင်္ဘောထဲသို့ဝင်ပြီး ဘုရားသခင်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ကို ခံရသကဲ့သို့ စစ်မှန်စွာပြောင်းလဲသော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများလည်း ဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရကြပါလိမ့်မည်။ (ဧဖက် ၁း၁၃)။ နောဧမိသားစုကို သင်္ဘောထဲ၌ ဘုရားသခင်တံဆိပ်ခတ်ထားသကဲ့သို့ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ ပြောင်းလဲမည့်ဂျူးလူမျိုး တို့ကိုလည်း ဘုရားသခင်သည် နဖူး၌တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ခံရကြပါမည်။ ဘုရားသခင် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို နောဧ မိသားစု သင်္ဘောထဲ၌ ခံရကြသည်နည်းတူ ဘုရားသခင် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရပါက မည်သည့် အကြောင်းကိစ္စဖြစ်စေ သင်၏ကယ်တင်ခြင်း မပျောက်နိုင်တော့ပါ။ ကတိတော်နှင့်ယှဉ်သော သန့်Sင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရသောကြောင့် သင်သည် ထာ၀ရစိတ်ချမှုရရှိပြီ ဖြစ်သည်။ (ဧဖက် ၁း၁၃)။ မည်မျှပင် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းခံရပါစေ သင်သည် နဖူး၌တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရပြီဖြစ်သောကြောင့် ခရစ်တော်နှင့် မခွဲ မခွါနိုင်တော့ပါ။
ဤသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏ ဂျူးလူမျိုးများတို့သာ ကြုံတွေ့ရမည့် အဖြစ်အပျက် မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ပင် ထောင်သောင်းချီသော တရုတ်ခရစ်ယာန်များ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ မိတ်ဆွေ သင်၌လည်းထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်လာပါမည်။
ခရစ်တော်ထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါ။ စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ကိုယ်စွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှနှင့် ကိုးစားပါ။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ပါက သင်သည် အသစ် တဖန်မွေးဖွားခြင်း ခံရပါမည်။ ဘုရားသခင်၏ တံဆိက်ခတ်ခြင်းကိုခံရပါက မည်သည့် အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ပြဿနာအတိဒုက္ခ ရောက်နေပါစေ။ သင်၏ ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု မပျောက်ပါ။ ခရစ်တော်သခင်၌ သင်၏အသက်တာ လုံခြုံမှုရှိနေ၍ ဖြစ်သည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ ဂျူးပြောင်းလဲသူတို့ လျှို့ဝှက်စွာထိုသို့ တွေ့ကြုံရပေမည်။ ယနေ့ တရုတ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ တိတ်ဆိတ်စွာ ကြုံတွေ့နေရကြပါသည်။ သူတို့ ယေရှုကိုယုံကြည် သောကြောင့် ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းကို ရရှိကြပေပြီ။ မည်သို့ပင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ရပါစေ ထိုသူတို့သည် ဘယ်တော့မှ ယုံကြည်ခြင်းကို မစွန့်ပဲ စာတန်မာရ်နတ် နောက်သို့လည်း မလိုက်တတ်ကြပါ။
ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အပြစ်၏ အဖိုးအခအတွက် ပေးချေလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်ကိုဆေးကြောဖို့ အသွေး သွန်းလောင်း ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ သင့်အား ထာ၀ရ အသက်အလို့ငှာ ရွေးနှုတ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ထာ၀ရအသက် ဘယ်တော့မှ မပျောက်ရတော့ပါ။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းခံရပါသော်လည်း အသင်းတော်ကို မစွန့်ပါနှင့်။ ခရစ်တော်ကိုလည်း ကျောမခိုင်းပါနှင့်။ သင့်အပြစ်များကို သိနားလည် သဘောပေါက်ပြီး ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ထံ တိုးဝင်လာပါမည်အကြောင်း သင့်အဖို့ ဆုတောင်းပေး နေပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကို သင်ခံစားဖို့အလို့ငှာ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ သင်သည် မကြာခင် အသက်တာပြောင်းလဲပြီး ခရစ်တော်နှင့်မိတ်သဟာရ အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ (အာမင်)။
ဒေါက်တာဂျွန်အာရိုက်စ် သီကုံးသော သီချင်းနံပါတ်(၈) “လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းရွက်ခြင်းကျူး” ကို သီဆိုကြပါစို့။
ယေရှုကျွန်ုfပ်သည် ကိုယ့်လက်ဝါးကားတိုင်ထမ်း၍ နောက်လိုက်ပါမည်။
စားစရာမရှိ၊ အထင်အမြင်သေး၊ စွန့်ပစ်ခံရလျှင် ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ကို ပြည့်စုံစေပြီ။
ကျွန်ုပ်၏ အလိုဆန္ဒကိုစွန့်၍ မျှော်လင့်ရာအရှင်သခင်ကိုယ်တော်ထံသို့သာ
ကိုယ်တော်၌ ချမ်းသာပါ၏။ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ကျွန်ုပ်အဖို့ပေတည်း။
ဤလောကကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်သော်လည်း ကိုယ်တော်ကိုစွန့်ပစ်သော်ငြားလည်း
ကိုယ်တော်သည် သနားကြင်နာသော အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူပါ၏။
ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အား ပြုံးပြသောအခါ ကျွန်ုပ်၌ ခွန်အားရှိပါ၏။
ရန်သူများ၏ စွန့်ပစ်ခံရပါသော်လည်း ကိုယ်တော်သာ ကျွန်ုပ်၏အလင်းရှင်ပါ။
သူတပါးသည် ကျွန်ုပ်အား ဆင်းရဲစေသော်လည်း ကျွန်ုပ်ကိုယ်တော်ရင်ခွင်၌ရှိပါ၏။
ဘ၀အသက်တာမောပန်းသော်လည်း ကောင်းကင်ဘုံတွင် ကျွန်ုပ်အဖို့အေးမြလျက်ရှိ
သောကပူဆွေးမှုက ကျွန်ုfပ်အား ကိုယ်တော်မေတ္တာသာလျှင် အေးမြစေ၏။
ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုများပါသော်လည်း ကိုယ်တော်သာ ဝမ်းမြောက်ရာအရှင်ဖြစ်ပေသည်
(၁၇၉၃-၁၈၄၇ ခုနှစ်၌ ဟင်နရီအက်ဖ်လိုက်သီကုံးသော လက်ဝါးကားတိုင်ကို
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာခရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ဧဖက် ၁း၅-၁၃ ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိတ်ဖစ်မှ (၁၇၉၃-၁၈၄၇ ခုနှစ်၌ ဟင်နရီအက်ဖ်လိုက်သီကုံးသော လက်ဝါးကားတိုင်ကို ထမ်းရွက်ခြင်းကျူး” ကို သီဆိုပေးပါသည်။